« TOSIK’ART » : Notolorana lelavola 20.000.000 Ar ny nahazo ny laharala voalohany
Notontosaina tetsy amin’ny Carlton Anosy tamin’ny talata 15 oktobra 2019 lasa teo ny famaranana ny fifaninanana TOSIK’ART izay teo ambany fiahian’ny Praiminisitra Ntsay Christian, fifaninanana izay nokarakarain’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina. 17 octobre 2019
10 ireo nahazo loka ka ny laharana faha-6 hatramin’ ny faha-10 notolorana vola mitentina 2.500.000 Ariary. Ny faha-5 : 2.500.000 Ariary, ny laharana faha-4 : 5.000.000Ariary izay avy amin’ny BOA. Lelavola mitentina 15.000.000 Ariary kosa ny an’ny laharana faharoa izay azon’i Bruce Lantoniaina tao anatin’ilay tetik’asa “B Audio” Avy eto Analamanga.
Andriambalo Tantelinirina, tetikasa “Managnano” avy any amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany no nahazo ny voalohany tamin’ny tetikasa « Tosik’Art » ka notolorana vola 20.000.000 Ariary. Fananganana ivon-toerana hampirantiana ny fomba amam-panao any amin’ny faritra Vatovavy fitovinany no nataony. Antony nisafidiana izany ny fahitany fa olona maro no liana amin’ny kolontsaina mampiavaka ity faritra ity kanefa tsy misy ny fampahafantarana izany noho ny tsy fisian’izay ivon-toerana izay. Efa vonona ny toerana hanorenana sy hametrahana ny tetikasa ary hiara- hiasa amin’reo mponina any an-toerana izy.
Notolorana mari-pankasitrahana avokoa ireo rehetra nandray anjara tao anatin’ny Tosik’art andiany voalohany. Raha nandray ity departemanta miandraikitra ny kolontsaina ity ny minisitra tompon’anadraikitra dia nanao fanamby fa hamerina indray ny lanjan’ny kolontsaina eto anivon’ny firenena ary hampitodika ny maso indray any amin’ny resaka kolontsaina mitarika fampandrosoana, tafiditra tanteraka ao anatin’izany fanamby izany ny namolavolana ity tetikasa ity. Noho ny fahatsapana fa tsy dia betsaka ny orinasa mitsangana amin’ny resaka ara-kolontsaina nefa maro ny olona manana hevitra sy vina momba izany no nandrisika azy hikaraka izany. Hita ihany koa fa manana ny maha samihafa azy amin’ny fananganana orinasa hafa ny fananganana orinasa ara-kolontsaina satria tsy voatery hita mibaribary any am-piandohana ny vola hampidiriny, ary noho ny fahatsapana fa zava-dehibe ny kolontsaina eto amin’ny firenena no tena antony manokana nanosika ny minisitera hikarakara ity hetsika fifaninanana hanampiana ireo tanora Malagasy manana vina samihafa sy tetik’asa ity.
Tetikasa 726 no voaray manerana an’i Madagasikara. Natao ny sivana voalohany niandraiketan’ireo « vaomiera teknika » mifandraika amin’ny sehatra nidirana sy ny antontan-taratasy feno sy tonga ara-potoana ka 390 tamin’ireo 726 no voatazona. Niroso indray ny sivana faharoa nataon’ireo mpitsara. Taorian’izany, tetikasa 89 no voatazona rehefa nandalo ny fitsirihana niainga tamin’ireo masontsivana ireo. Avy amin’ireo 89 ireo no nakana ireo 25 mianadahy nitondra tetikasa avy amin’ny lafy valon’ny Nosy ka naharesy lahatra ny mpitsara. Niatrika ny fiofanana avy hatrany izy ireo nandritra ny tapa-bolana, fiofanana niandraiketan’ireo manam-pahaizana manokana eo amin’ny fanohanana sy fandrafetana tetik’asa samihafa.
Haavon’ny lentan’ny mpifaninana
5 no noeritreretina fa hisitraka ny tosika ara-bola tany am-piandohana saingy noho ny fahitana ny haavon’ny lentan’ny mpifaninana tsirairay avy dia nampitomboina 10 izany noho ny tosika nataon’ny mpiara-miombon’antoka rehetra, anisan’izany ny BOA Madagascar sy ny Masoivohon’i Frantsa. Ankoatra ireo tosika ara-bola dia harahina mandritra ny herintaona izy ireo amin’ny fanatanterahana ny tetikasany.
Fantatra ihany koa fa ny misy amin’izy 25 mianadahy ireo izay tsy voatery amin’ireo 10 voalohany dia hisitraka ihany koa ny tetikasa Fihariana araka ny safidy ataon’ny Fihariana sy ny mpiara-miombon’antoka aminy. Nanamafy ny praiminisitra fa « Maro ny tanora malagasy no manana hevitra sy vina fa tsy ampy tosika hahafahany mamadika izany ho zavatra mivaingana. Mila ny tosika tahaka izao ny tontolon’ny famoronana sy ny fananganana orinasa. Ary tafiditratanteraka ao anatin’ny paikadin’ny fitondram-panjakana izany fampiroboroboana ny fananganana orinasa izany. Hanosika ny olona manana tetikasa sy vina na io ara-bola, ara-piofanana sy ara-torohevitra mba hahafahan’izy ireo mivelona amin’izany fahaiza-manaony izany. » Tsy hijanona hatreo ny fanombohana ity tetik’asa fifaninanana hanampiana ny tanora Malagasy ity raha ny fanazavana.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68235) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (647) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (401) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (177) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (91) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (81) 21 février 2020